Juventus oo ka adkaatay Barcelona , iskana xaadirisay Semi Final-ka Champion-ka. | Mustaqbal Radio
Home - Barnaamijyo - Ciyaaraha - Juventus oo ka adkaatay Barcelona , iskana xaadirisay Semi Final-ka Champion-ka.
Juventus oo ka adkaatay Barcelona , iskana xaadirisay Semi Final-ka Champion-ka.
April 20, 2017	21 Views
Kooxda Barcelona ayaa sagootisay kasii mid ahaan shaha tar-tanka ugu xiisaha badan Yurub ee Uefa Champions League kadib markii ay ku guul dareysteen inay kasoo laabtaan 3:0 oo ay Juventus kaga adkaatay lugtii hore.
Kooxda Talyaaniga ka socotay ayaa ciyaartii xalay ee ka horeysay ku adkaatay 3:0 kulan kaa oo todobaadkii hore ka dhacay garoonka Juventus Stadium.
Taageerayaal badan oo kooxda Barcelona ah ayaa kulankii xalay ka hor qabay aragtida ah inay kooxdoodu kasoo laaban kartay guul darradii hore.
Ciyaarta ay soo bandhigtay kooxda Juve oo aheyd mid isku dheeli tiran ayaa ka saaciday inay natiijadu noqoto mid furan fursado dhowr ah oo ay labada dhinac heleen ma aysan dhicin in kooxna ay gool dhaliso ugu dambeynti ciyaarta ayaa kusoo idlaatay 0:0 , taasi oo cel-celis ahaan la micno ah in Juve ay kusoo gudubtay 3:0.
Kooxda Juventus ayaa iminka kamid noqotay 4 koox ee gaartay wareega Semi Final-ka oo kala ah Real Madrid , Atletico Madrid , AS Monaco & Juventus , isku aadka kooxahan ayaana la sameyn doonaa Jimcaha 21 April.